Saodiana 16 Taona Miady Ao Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2013 0:51 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, عربي, Italiano, македонски, Español, Català, English
Nanomboka tamin'ny fivakisan'ny ady an-trano tao Syria, roa taona sy tapany lasa izay, miezaka manintona ireo tanora mba hanatevin-daharana ny tafikany ireo vondrona Jihadista isan-karazany. Nanjary fitaovana goavana hanentanana ireo mpitahiry ny nentin-drazana hiringiriny an'arivony hanatevin-daharana ireo vondrona ny famoahana tsy an-kiato ireo sary misy ny famonoana nandritra izany fotoana izany, ary iray amin'ireo loharanom-baovaon'ny mpiady jihadista i Arabia Saodita.
Tamin'ny herinandro lasa, nahasarika ny maro tao amin'ny tontolon'ny Twitter Saodiana ny tantara miavaka iray raha tonga tao Syria i Moath al-Hamili, 16 taona mba hanatevin-daharana ireo vondrona ireo. Moath dia zanaka lahin'i Reema al-Jourish, izay fantatra tamin'ny fandraisany andraikitra mavitrika amin'ny fanoherana ny fanagadrana tsy amin'ny antony ny vadiny, Abdallah al-Hamili, izay nogadraina nandritra ny 10 taona tsy nisy didim-pitsarana. Raha ny marina, namoaka didi famotsorana azy ny fitsarana, saingy mbola notazonina tao am-ponja foana izy. Tamin'ny volana Febroary kosa, iray tamin'ireo vehivavy nandray anjara taminà sit-in nalaza i al-Jourish, talohan'ny nisamborana sy nanagadrana azy ireo nandritra ny herinandro. Natao fahirano ny tranom-pianakaviany, ary noraràna tsy hifandray amin'iza na iza ireo zanany. Nosamborina ihany koa i Moath raha nitaky ny famotsorana ny reniny.
Moath, taorian'ny fahatongavany tao Syria. via @twit_rima
Tamin'ny Alarobia, al-Jourish nisioka hoe [ar]:
@twit_rima: Misaotra Allah, noho ny fitahianao rehetra. Tonga ao Syria ny zanako lahy Moath. Mangataka amin'i Allah aho mba hanome hery ho azy.
@twit_rima: Niharan'ny herisetra tao [Arabia Saodita] ny zanako lahy noho ny fanohanany ireo gadra. Tsy tiako ho mora azon'ireo lian-drà ny zanako lahy. Miantra azy kokoa ny tanin'ny fahamendrehana sy ny voninahitra.
gazety al-Hayat namoaka tantara fohy [ar] momba azy, izay milaza hoe:
Hoy izy (al-Jourish): “Nampitandrina ahy momba ny zanako lahy, Moaht ny solontena avy ao amin'ny Minisiteran'ny Atitany antsoina hoe Um Mohamma. “
al-Jourish namaly izany tantara izany tamin'ny alalan'ny fisiahana hoe:
Notaterin'ny gazety Journal Al -Hayat araka ny hitiavany azy ireo fanambarako. Tiako ho fantatr'ireo mpanao gazety fa noraketiko am-peo ny antso an-tariby. Voalohany indrindra, tsy nampitandrina ahy momba ny zanako lahy ny [minisiteran’] ny atitany, fa nandrahona ahy. Nilaza izy [solotenan'ny minisitera] fa te-ho eo akaikin'ny rainy any am-ponja izy. Nandrahona ahy amin'ny filazana momba ny zanako vavy ihany koa izy. Nilaza izy fa mety tsy hahita azy ireo intsony aho. Nilaza taminy ihany koa aho fa tiako ho eto Syria ny zanako lahy fa tsy any amin'ny fonjan'ny polisy miafina. Nahita maso ny vokatry ny fampijaliana izy ary henony tamin-drainy izay zava-nihatra tamin-drainy tao am-ponja. Tsy tiako hiverina ny loza mahatsiravina nahazo ny rainy. Tiako ho ao amin'ny tanin'ny fahamendrehana sy hitsoka fahalalahana izy fa tsy any amiin'ny fonjan'ny polisy mpitsikilo ho eo ambanin'ny fampijaliana. Tsy nolazain'ny gazety ihany koa fa niharan'ny herisetran'ny polisy mpitsikilo izay nikasa hampahory ahy ara-tsaina amam-panahy ihany koa aho . Tsy notateriny ihany koa fa nahazo didy famotsorana ny vadiko .
Nizarazara ny fihetseham-po teo amin'ny tontolon'ny twitter. Nientanentana manoloana ny vaovao ireo mpomba ny jihadista ary nandray izany ho fanararaotana handrisihana ireo tanora hanatevin-daharana ny tolona. Etsy ankilany, maro ireo olona nanome tsiny ilay renim-pianakaviana ho tsy miraika ary mampidi-doza ho an'ny zanany lahy.
Nada A nanoratra hoe:
Mbola ratsy kokoa noho ity vehivavy mandefa ny zanany mba ho faty ao amin'ilay antsoina hoe Jihad ity ireo izay faly aminy. Handeha ho aiza isika?
Maro tamin'ireo izay efa nandray anjara tamin'ny hetsika politika milamina no nivadika lasa mpikambana ao amin'ny vondrona mpandala ny nentin-drazaa hiringiriny maherisetra rehefa nosamborina sy voaheloka higadra izy ireo. Efa nitatitra ihany koa ilay mpikambana ao amin'ny Fikambanana miaro ny zo sivily sy politika (ACPRA) Mohammad al-Qahtani izay any am-ponja amin'izao fotoana izao fa hampirisihan'ny minisiteran'ny atitany hiady ao Syria ireo gadra:
@MFQahtani: Fanafintohinana vaovao avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany Saodiana: Omen'izy ireo famotsorana ireo tanora sasany voasambotra tamin'ny fihetsiketsehana raha nanaiky hiady ao Syria
Fanampin'izany, mpikambana ao amin'ny ACPRA, Abdullah al-Hamid nitatitra tranga tahaka izany nataonà mpitsara:
@Abubelal_1951: Nilaza tamin'ny taratasy nalefany ho an'ny mpanjaka ny renin'i Mohammad al-talaq, izay voavono tao Syria fa: nampitandreman'ilay mpitsara al-Hosni tsy hanao fiihetsiketsehana ny zanako lahy sy ireo namany mpanao fihetsikesehana 19 ary nandrisika azy ireo mba hiady amin'ireo Shiita any [Syria]!